Moita Kugeda Geda kweMeno muMauto nemuZanu-PF Apo Nyaya yeKuda kuBhomba Mhuri yaVaMugabe Yokomba
Zvinonzi paita kugeda geda kwemeno kune vamwe vakuru muhurumende nemuchiuto zvichitevera huchapupu hwakapihwa mudare naVaBorman Ngwenya avo vari kupomerwa mhosva yekuda kubhomba kambani yemhuri yemutungamiri wenyika VaRobert Mugabe yeAlpha Omega Dairy kuMazowe.
VaNgwenya mumwe wevanhu vana vakapomerwa mhosva iyi vanoti vaishanda nevakuru vemuchiuto kuronga kubhomba uku. VaNgwenya vari muchiuto vachishanda pasi pebandauko reZimbabwe National Army 1 Field Regiment kuCranborne Barracks muHarare.
Dare ramejastiriti muHarare neMuvhuro rakatenda kuti makambani embozhanhare anoti Econet neNetone aburitse magwaro evakuru muchiuto vanonzi vaifonerana naVaNgwenya nevamwe vavo. Ichi chikumbiro chainge chaiswa kudare nemagweta aVaNgwenya.
Vakuru kuEconet neNetOne vasina kuda kudomwa nemazita vaudza Studio 7 kuti vanoita zvinhu pamutemo kana dare richinge rapa mutongo panyaya dzakadai vanoita sezvataurwa.
Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti nyaya iyi yakanganganawo nekunetsana kunotyisa kuri kuitika mubato reZanu-PF.
Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vakatombotaura pamusangano kuChiweshe, Mashonaland Central kuti kuti pane vanhu vari kuda kuuraya vana vavo. Vakatiwo vanhu ava vaida kutyisidzira VaMugabe kuti vaende pamudyandigere.
Gweta guru renyika VaJohannes Tomana vakatopinda mukanwa mamupere mushure mekunge vaburitsa VaNgwenya nemumwe wavo muhusungwa vachiti vainge vatenda kuita zvapupu zvehurumende.
Zvinonzi nevamwe vakuru muhurumende VaMugabe vave mubishi kuumba Tribunal yekuferefeta VaTomana zvichapa kuti vamiswe basa mumazuva mashoma anotevera.
Gweta raVaNgwenya, VaMusindo Hungwe vanoti VaNgwenya vane humbowo hwekuti vaishanda nevamwe vakuru mumauto uye izvi zvichabuda pamapepa achabva kumakambani embozhanhare.
Hurukuro naVaMusindo Hungwe